အနာဂတ်တွင် Microsoft ပါဝင်မည် Martech Zone
အနာဂတ်တွင် Microsoft ပါဝင်သည်
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2011 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2011 Douglas Karr
ငါမှာလုံလောက်တဲ့ Microsoft ဖော်ပြမထားဘူး Martech Zone။ ကုမ္ပဏီတွင်ကြီးမားသောခြေရာတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ LiquidSpace ၏ COO နဲ့စကားပြောတဲ့အခါ၊ Doug Marinaroနှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနှင့်အတူစကားပြော Josh Waldo, အသေးစားစီးပွားရေးပိုင်ရှင်နှင့်အုတ်မြစ်ချရန် Microsoft သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ကုမ္ပဏီများ၏ဘ ၀ တွင်အစောပိုင်းကမိုက်ခရိုဆော့အတွက်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်ကိုပေးလိမ့်မည်။
Josh Waldo သည် SMB (အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) ဖောက်သည်များနှင့်အဖြေများပါတနာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ (ယခုသူသည် Microsoft မှစျေးကွက်အသစ်များနှင့်ထွန်းသစ်စလိုင်းများ၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည်) ဖြစ်သည်။ Josh သည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်နံပါတ်အချို့ကိုမျှဝေခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၉.၅ ဘီလီယံ (ခ) ဖြင့်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ပို၍ ပင်အံ့စရာကောင်းသည်မှာထိုဘတ်ဂျက်၏ ၇၀ မှ ၉၀% သည်မိုးတိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်ဗဟိုပြုလိမ့်မည်။ အလို။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် SMB များနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် BizSpark.
အစောပိုင်းအဆင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အောင်မြင်ရန်ကူညီရန် BizSpark သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်လောင်စာဆီဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်နောက်လာမည့်နည်းပညာစွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
Xero စာရင်းကိုင်, ငွေတောင်းခံနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း software ကို
လေပြင်းတိုက်ခြင်း - startup profile တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၃၅၀၀၀ နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နေရာ။
ကွမ်းခြံကုန်း - မိုဘိုင်းစျေးကွက်အားလုံးတွင်ရောင်းအားကိုခြေရာခံရန်လျှောက်လွှာ။
LawPivot - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြည့်စုံသောတရားဝင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု။
oDesk - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအထိမည်သည့်အရာအတွက်မဆိုဝေးလံသော ၀ န်ထမ်းအရင်းအမြစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် site တစ်ခု။
မျိုးစေ့များကိုကူညီခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းကုမ္ပဏီများကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကိုလည်းမပြောပါနှင့်။ ဒီမှာ Indianapolis မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာတစ်ခုက startup နင်္ဂနွေပိတ်ရက်.
Bizspark သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုငွေများ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရုံမျှမက၎င်းကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များကိုလည်းကူညီရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဝင်ပါ။ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ရန်သင့်အားကူညီရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစာရင်းကိုသင်၏areaရိယာအတွင်းတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ Bizspark သည်ကျောင်းသားများကိုစီးပွားရေးနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး ။ ကျောင်းသားမှသည်သေးငယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိမိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့လိုအပ်သည့်အကူအညီအားလုံးကိုပေးနေသည်။ ဒါကအတော်လေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုပါ။
သူတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့သည် LiquidSpace, အပေါ်တည်ဆောက်မယ့်စိတ်ကူး application ကို Windows Azure ပလက်ဖောင်း။ LiquidSpace သည် site နှင့် mobile application နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းဝန်ထမ်းများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ နာရီအနည်းငယ်၊ တစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရန်နေရာရှာနိုင်သည်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသည်တည်နေရာကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်မြို့တစ်မြို့သို့ပျံသန်းနိုင်ပြီးအချိန်မရွေးရနိုင်သည်။
အခန်းများရှိသောကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကသူတို့ရရှိနိုင်မှုကို LiquidSpace တွင်တင်နိုင်သည်။ နေရာလွတ်လျှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နေရာသည်ငွေကုန်ကျလျှင်၊ LiquidSpace သည်ဝင်ငွေ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိသည်။ LiquidSpace ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် COO Doug Marinaro နှင့်စကားပြောဆိုရာတွင်သူတို့သည် BizSpark နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Azure ပလက်ဖောင်းကိုလျင်မြန်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေ ၆ ပတ်အတွင်း LiquidSpace သည် beta ဖြစ်သည်။ Doug ကကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် သူ၏မိုဘိုင်းဖုန်းငွေတောင်းခံလွှာထက်လျော့နည်း.
LiquidSpace တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနေရာ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီးအများစုမှာကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင် Palo Alto ရှိဌာနချုပ်တစ်ခုနှင့်အတူ Minneapolis အကြား Minsk ကိုအဝေးမှအလုပ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်း ၂၀ ရှိသည်။ Doug ကပြောကြားရာတွင်ပလက်ဖောင်းနှင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအချက်မှာသူသည်နည်းပညာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် Azure ပလက်ဖောင်း၏တိုးချဲ့နိုင်မှုသည်ကုမ္ပဏီနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစျေးသက်သက်သာသာဖြင့်တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုသူယုံကြည်သည်။
Microsoft Azure ပလက်ဖောင်းအကြောင်းအသေးစိတ်:
အကယ်၍ သင်သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်သုံးနှစ်မပြည့်လျှင်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ မီလီယံအောက်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတီထွင်သည်ဆိုပါစို့ ... သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ BizSpark အသင်းဝင်ခြင်းအတွက်ယခုစာရင်းသွင်းပါ.
23:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 04